Ihowuliseyili PTFE lokucoca ulwelo waziva abavelisi kunye nabathengisi | Isihluzi seRiqi
I-PTFE ifaneleke ngakumbi kwiimeko ezigwenxa ezifuna ukumelana nokubola kunye nobomi benkonzo ende yezinto zokucoca, ukuphathwa komlilo ngamalahle avuthayo, ukutshisa inkunkuma, imveliso emnyama yecarbon kunye nemveliso yeTiO2. Ingasetyenziselwa inkqubo yokuqala yokunyibilikisa isinyithi kunye nokucokisa ezinye izinyithi kunye nemveliso yemichiza.
Isetyenziswa ngokubanzi kwintsimbi, amandla, inkunkuma yokutshisa igesi kunye nezinye iindawo ezinobunzima.
Iifilitha zokucoca ulwelo, ingxowa yokuqokelela uthuli, ibhegi yokuhluza uthuli, iingxowa zothuli, iikawusi zokucoca ulwelo, - zonke zithetha into enye: Isihluzi sebanga lendawo yelaphu elenziwe ngezinto zomsebenzi onzima, yonke impahla esekwe kwilaphu, isetyenziselwa iinkqubo zokuqokelela uthuli, kuyo nayiphi na inkqubo yokuhluza okanye ulawulo longcoliseko.
Icandelo Igobolondo leShell PTFE
Ubunzima I-750 ± 5% g
Ukutyeba 1.8 ± 0.1mm
Ukungena komoya I-120-150 (L / dm2 .min)
Amandla eqine N / 5 * 20cm Ubude R650
Ubushushu Ukubala 260ºC
Gqiba Ukuzinza kobushushu, i-Glaze, i-Singe, i-PTFE yokuQinisa
Sebenzisa Ubungakanani Iyunithi ene-ESP kunye neengxowa okanye iiyunithi ezindala zeyunithi, okanye iyunithi ifuna ubude obude kunye ne-oxgen esezantsi. Esp yemixholo yothuli ene-SO2 ephezulu kunye NOX
Indawo yesicelo / Ubungakanani boSetyenziso Isinyithi, isinyithi, isamente, amandla, imichiza,
Unyango lothuli, ukwakhiwa kwenkunkuma.
Izinto ezitshisa inkunkuma,
Iimbonakalo I-Acid Resistant .I-Alkali Resistant .Yenziwe ngokwezifiso ..
Egqithileyo Isihluzi sePSP saziva
Okulandelayo: Isicoci sobungqina bamanzi kunye neoyile baziva
Isihluzi senkampani yeRiqi sivelise ipholiyesta yenaliti yokuziva ngathi ikhethiwe i-1-2.5 d yefayibha esemgangathweni ye-polyester, enamandla aphezulu kunye nentambo ephantsi yokuluka ukoluka iscrim eqinisiweyo, ngokusebenzisa ukomeleza i-acupuncture kunye nenkqubo yonyango. Ukongeza kwiimpawu ze-porosity ephezulu, i-permeability elungileyo, i-asidi ukumelana kunye nealkalinity yokumodareyitha yelaphu eliqhelekileyo lokucoca ulwelo, imveliso inokumelana kakuhle kakhulu nokunxiba, ke lolona hlobo lusetyenzisiweyo lukhulu lokuziva ...